Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Sri Lanka » Dalxiiska Duurjoogta: Baahida Sheekooyinka Midabka leh
Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Warshadaha Warshadaha • News • Wararka Sri Lanka • Dalxiiska • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda
Daneeyayaasha ku hawlan suuq-geynta dalxiiska Sri Lanka waa inay abuuraan sheekooyin midab leh oo ku saabsan khibradaha duurjoogta ee Sri Lanka, halkii ay soo bandhigi lahaayeen xaqiiqooyinka iyo tirooyinka aasaasiga ah. Waxa loo baahan yahay waa in la abuuro oo la sheego sheekooyinka duurjoogta ah oo leh taabasho bini'aadannimo.
Marka dalxiiska suurtagalka ah uu waco hudheel ama hay'ad socdaal si uu wax uga weydiiyo soo jiidashada duurjoogta ee Sri Lanka, inta badan shaqaalaha iibka ayaa kaliya bixiya safarka waxayna sheegaan xayawaanka la arki karo, halkii ay u muujin lahaayeen duurjoogta si soo jiidasho leh.
Tani waxay u baahan doontaa xirfadlayaasha dalxiiska ee ganacsiga gaarka loo leeyahay si ay u helaan khibrad sare oo duurjoogta ah iyo xamaasad, fariintuna waa inay hoos ugu dhacdaa shaqaalaha xiriirka la leh dalxiisayaasha. Dhanka kale, hoteellada intooda badan hadda waxay haystaan ​​​​dhakhaatiir dabiici ah oo mushaharkooda ku jira, hudheelada noocan oo kale ah waa inay ku dhiirigeliyaan inay ku hawlan yihiin abuurista sheekooyin dalxiisayaasha si ay ugu raaxaystaan ​​duurjoogta aagga.
Sanado badan, waxaan soo bandhigayay sheekooyin badan oo ku saabsan shakhsiyaadka xayawaanka duurjoogta ah ee soo jiidashada leh. Kuwo kale oo badan, waxaan si koobab leh wax ugu qoray:
• Rambo maroodiga duurjoogta ah oo roondo ku haya xidhmada Beerta Qaranka ee Uda Walawe.
• Marxuum Walawe Raja, Boqorka Uda Walawe oo aan muran lahayn muddo tobanaan sano ah.
Gemunu, maroodiga duurjoogta ah ee xun xun ee Yala National Park, kaas oo u dhaca baabuurta martida si ay cunto.
Hamu iyo Ivan, kuwa qaan-gaarka ah, jidadka-casriga ah, shabeelka lab ah (kan dambe ee dhintay) sidoo kale ee Yala National Park.
Natta, shabeelka caanka ah ee lab, iyo Cleo, shabeel dheddig oo qaan-gaar ah, ee Beerta Qaranka ee Wilpattu.
Timoteyos iyo Tabitha, 2da Dabagaale ee waaweyn ee Semi-tame ee Seenuggala Bungalow ee gudaha Uda Walawe Park.
Waxaan ka soosaaray xumaantoodii oo waxaan ka dhisay jilayaal hareerahooda. Aniguna kama raali gelinayo "bani'aadantinimada" iyaga. Taasi waa waxa dadka ka dhigaya mid aad u xiiso badan. Waxaan dhawaan qaatay sheekadii Yaxaaskii Villy ee Jet Wing Vil Uyana Hotel, oo aan sheeko dhan ka sameeyay.
Afrika ayaa laga yaabaa in ay leeyihiin "Shanta Weyn" xayawaanka, laakiin waxaan sidoo kale leenahay naasleyda "Afar Weyn" noo gaar ah - nibiriga buluuga ah, maroodiga, shabeelka, iyo orso caajisnimada. Qaar ka mid ah asxaabteyda waxay ka hadlaan "Shanta Weyn," iyagoo ku daraya nibiriyada shahwada sidoo kale liiskan, laakiin kuma raacsani inaan haysto laba nooc oo isku mid ah liiska.
Sri Lanka waxay leedahay ku dhawaad ​​30% nooc ka mid ah daboolka cagaaran, in ka badan 3,000 dhir, iyo in ka badan 1,000 nooc oo xayawaan ah. Markaa waxa hubaal ah inaynaan wax wanaagsan haysan dalxiiska duurjoogta agab xayaysiis Markaa waxaan la yaabanahay haddii Sri Lanka runtii u baahan tahay tiro badan oo dalxiisayaal ah, mise waa inaan raacnaa istiraatiijiyad ka duwan tayada tayada?
Sri Lanka waxa ay soo dhawaysay 2.3 milyan oo dalxiisayaal ah sanadka 2018 iyaga oo kasbaday dakhli dhan $4.4 bilyan. 2018 waa xaalada ugu fiican ee salka ku haysa, sababtoo ah 2019 waxa na soo maray weeraradii argagixisanimo, ka dibna waxa aanu helnay Faafida COVID. Dalxiiska duurjoogta waa qayb si joogto ah u koraya, Wikipedia ayaa sheegaysa in dalxiiska duurjoogta ay hadda ka shaqeeyaan 22 milyan oo qof adduunka oo dhan si toos ah iyo si dadbanba waxayna wax ka badan $120 bilyan ku biiriyaan GDP-ga adduunka.
Xataa Sri Lanka, waxaan ku aragnay koror aad u weyn qeybtan. Sannadkii 2018 ku dhawaad ​​50% dhammaan dalxiisayaasha dalka ayaa booqday ugu yaraan mid ka mid ah seerayaasha duurjoogta, laga soo bilaabo 38% sanadkii 2015. Waaxda Ilaalinta Duurjoogta ayaa kasbatay Rs 2.1 bilyan sanadka 2018 iibka tigidhada shisheeye.
Waa in la caddeeyo, si kastaba ha ahaatee, in warshadaha dalxiisku ay u dhaqmaan sidii ilaaliyaha xayawaanka duurjoogta ah ee Sri Lanka halkii ay keeni lahaayeen hoos u dhac, taas oo ku saabsan qaybta gaarka ah waa in ay feejignaadaan oo ay masuul ka yihiin.